FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABRADINGER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labradinger
Alika Springer Spaniel / Labrador anglisy Retriever mifangaro alika
Mankanesa any amin'ny Labradinger efa lehibe -'Wister = laboratoara mainty 50% (ray) / 50% Espaniola lohataona (reny). Ny alika tsara indrindra nananako ny biby tiako indrindra nandritra ny fotoana rehetra! Malemy fanahy, manan-tsaina, be fitiavana ary tena tia olona i Wister. Izy dia miompana amin'ny olona, ​​manana fanahy (sy mpanao hatsikana)! '
Ny Labradinger dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny English Springer Spaniel ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Labradinger Retriever
Mpanoratra International Canine Registry®= Labradinger
'Axel no Labradinger ahy aseho toy ny alika kely 4 volana. Tena marani-tsaina izy. Tiany ny mamerina sy be fitiavana. '
'Ellie, Springador (safidin'i Angletera) enin-taona na Labradinger (safidin'i Etazonia) dia eo am-pelatanany' miasa 'amin'ny sary iray rehefa miara-miasa amiko ho toy ny alika famotopotorana afo izahay mikaroka seho afo hahitana ny anton'ny afo. Raha nisy olona nampiasa ranon-javatra mora mirehitra (toy ny lasantsy) handrehitra ny afo dia hasehon'i Ellie ahy hoe aiza marina io. '
Fluke the Labradinger amin'ny 2 taona— 'Fluke dia feno hery ary manana toetra malemy paika. Tiany ny manenjika izay mihetsika, miafina anaty ahitra lava ary milalao miaraka amin'ireo namany amin'ny fikarakarana alika kely. '
Murphy the Labradinger puppy at 3 volana (English Springer Spaniel / Labrador Retriever mix)
Jacca the Labradinger puppy at 12 herinandro (mixer English Springer Spaniel / Labrador Retriever mix) mitsako sombin-kazo
Jacca the Labradinger puppy at 12 herinandro (English Springer Spaniel / Labrador Retriever mix) - ' Teo amoron-dranomasina i Jacca izay nisy rivo-mahery izay nampitsoka ny sofiny tany ivelany (mariho ny fiteniny nametra-pialana! Halany ny rivotra sy ny orana!) '
Andriambavy the labrador sôkôla / Springer Spaniel afangaro (Labradinger) alika kely amin'ny 3 volana— 'Toy ny Labs sôkôla ny mpiray tampo aminy. Ny iray nisy pentina fotsy teo amin'ny tratrany. Ny iray hafa dia mainty mainty / mainty misy marika mavo amin'ny tarehiny. Ilay 'Princess' antsika irery no hitantsika. Ny reniny dia Springer Spaniel ary faritra kely misy pentina ihany no mainty ary mainty ny ankamaroany. Hatreto, Princess dia manana toetra lehibe ary milamina nefa milalao indrindra amin'ny maraina. Nampianatra ny tenany izy haka ny entana tao amin'ny 2 ½ mos. Tiany tokoa ny mitsako zavatra. Manana maso volontany iray koa izy ary iray ny azy maso manga . '
Andriambavy the labrador sôkôla / Springer Spaniel afangaro (Labradinger) alika kely amin'ny 3 volana
Andriambavy the Chocolate Labrador / Springer Spaniel afangaro (Labradinger) alika kely amin'ny 3 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labradinger
Sary Labradinger Pejy 1
Sary Labradinger Pejy 2
Lisitry ny English Springer Spaniel Mix Dogs
king corso pitbull mifangaro alika kely
corgi afangaro amin'ny collie border
pupbull puppy ho an'ny olon-dehibe sary
manao ahoana ny alika labradoodle
kilalao mpiandry ondry australianina merle manga